Isimbo seLanna esikhethekileyo seVilla kunye neChapel - I-Airbnb
Isimbo seLanna esikhethekileyo seVilla kunye neChapel
Ikhethekileyo kwaye ibanzi kakhulu iLanna Style Villa eneMigangatho yasentshona kunye nezinto eziluncedo zasentshona. Kukho izakhiwo ezi-5 eziphambili kwi-Estate. Indawo ebanzi kakhulu ye-40sqm ye-Lanna style Villa, eyesibini i-30 sqmVilla, iNdawo yokuHlala ePhambili, iMaid House eneGumbi loMqhubi kunye neChapel. I-Estate yethu ineGadi enkulu egcinwe kakuhle, enezityalo ezininzi zeOrchids, iPalm kunye neBamboo imithi kunye nezinye iiFlora kunye neFauna. Zonke iibhedi kunye nefanitshala zenziwe ngeTeak Wood kwisitayile saseThai Lanna. Onke amagumbi ane-LG Artcool Airconditioning, iiTV ze-LG, iiMattresses ze-Slumberland kunye nezibane ze-LED kumgangatho okhethekileyo wokuphila waseYurophu. Singabonelela ngeBhedi yoNtwana ukwenzela umntwana wakho omncinci, ngokuqinisekileyo simahla. Ibekwe emazantsi eNtaba kunye nembono entle ukuya ezintabeni kunye neMyanmar. Indawo enkulu yohambo oluya eDoi Tung, iGolden Triangle, eMyanmar naseChiang Rai.